अष्ट्रेलिया पढन जानकाे लागी डिपेन्डेट भिषामा एक जना इमान्दार केटा मलाइ चाहिएकाे छ । तल विस्तृत विवरणा सहित ।यो नम्बर मा सम्पर्क गर्नुहोला… - Khabar Samachar
Home / सूचना प्रबिधि / अष्ट्रेलिया पढन जानकाे लागी डिपेन्डेट भिषामा एक जना इमान्दार केटा मलाइ चाहिएकाे छ । तल विस्तृत विवरणा सहित ।यो नम्बर मा सम्पर्क गर्नुहोला…
अष्ट्रेलिया पढन जानकाे लागी डिपेन्डेट भिषामा एक जना इमान्दार केटा मलाइ चाहिएकाे छ । तल विस्तृत विवरणा सहित ।यो नम्बर मा सम्पर्क गर्नुहोला…
2 weeks ago	सूचना प्रबिधि 1,072 Views
काठमाणडाै, धरान बस्ने सुनिता भन्ने नाम गरेकी सुनिता लामाले अष्ट्रेलिया जानकाे लागी अाइ एल पाल गरेर बसेकाे छु ।
जसकाे लागी अति नै इमान्दार र मेहेनती केटा चाहीएकाे हुदा इच्छुकले तल विवरणा सहित अाफनाे नाम र ठेगाना मेसेज गरनुहाेला । गत अाउन्े जुन जुलाइमा जाने गरी एप्लाइ गरनु परने भएकाे हुदा चाडाे चाडाे गरनु परनेछ ।
सुनिताले अाइएल मा ७ प्रतिशत अंक ल्याएर पास गरेकी छिन् । जसकाे लागी जम्मा खर्च १८ लाख रूपैया लाग्ने भएकाे हुदा
जम्मा सबै रकम सुनिता संग नभएकाे हुनाले जाे डिपेन्डेट भिषामा जान चाहाने व्यतिले अाधा पैसा लगाउनु परने भएकाेले चाडाे गरनु हुन अनुराेध गरदछु । हाल म काठमाणडाकाै चाबहिलमा बस्छु । त्यस कारणा इच्छुक इमान्दार केटा भए पनी हुने खासै धेरै पढेलेखेकाे पनि नचाहिने साेजाे भए हुन्छ । तर यहाबाट जादाखेर चाही अाधा खरच उसले र अाधा म अाफैले लगाउने भएकाे हुदा त्यस कुरामा चाही मन्जुर हुन अावश्यक छ ।
र बाकी रहेकाे बैक डिपाेजिट रकम जम्मा ५० लाख रूपैया पनि देखाउनु परने भएकाे हुदा त्याे सबै रकम पनि म अाफै नै देखाउछु । मलाइ मात्र इमान्दार मेहेनति र साेजाे केटा भए हुन्छ । जम्मा समय जानकाे लागी ६,७ महिना लाग्ने भएकाे हुदा त्यस अवधि भित्रमा मलाइ भिसा एप्लाग् गरनकाे लागी सहयाेग र साध चाहीएकाेहुदा चाडा भन्दा चाडाे मलाइ कमेन्ट बक्समा मेसेज गरनुहाेला । तपाइकाे सम्पुणा विवरणा सहित मलाइ मेसेज ग।नु भयाे भने म त्यसैकाे अाधारमा तपाइलाइ मेसेज गरनेछ । र अनी त्यसपछि तपाइ हामी भेटभाघ गरन सकिने छाै । त्यतिन्जेल सम्मकाे लागी तपाइले मलाइ तपाइकाे सम्पुणा डकुमेन्टहरू मेसेज गरनुहाेला ।
केटा चाही लगभग २२ बष जतिकाे हुनु परनेछ । त्याृ भन्दा कमकाेलाइ डिपेन्डेट भिषामा जान लगभग चान्स नहुने भएकाे हुदा२२ बष भन्दा माथिकाेले मात्र मलाइ मेसेज ग।नुहाेला । नत्र फे तपाइले त्यतिकै दुख मात्र पाउनु परने हुन्छ । त्यस कारणा पनि मलाइ याे डिपेन्डेड भिषामा जानकाे यस्ता किसिमकाे मेरा सरतहरू मन्नु परने हुन्छ ।
अरूकाे अदर सम्मान गरने
यि गुणाहरू भएकाे केटा भए मलाइ तुरून्त मेसेज गरेर उसकाे नम्बर पनि मलाइ छाेडि दिए हुन्छ । पछि म अाफै कल गरछु । तयतिन्जे सम्मकाे लागी ढुक्क बस्न हुन म तपाइलाइ यहि अनुराेधकाे साथ तपाइले पनि मलाइ विश्वास गरनु गरने हुन्छ , त्यस कारणा पनि तपाइले यि कुराहरूमा ध्यान sidasamarchar
Previous यौन सम्पर्क गर्दा महिलाले किन आखा बन्द गर्ने र मन्द आवाज निकाल्छन ? यौन सन्तुष्टि भएर हो कि पिडा भएर ?
Next शरद गौचनको हत्या गरे’ भन्ने मनोज पुन को हुन् ? कस्का लागि गर्छन काम ? किन प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन ?
'' Download तपाईको मोबाइलमा सेभ नभएको वा नचिनेको नम्बरबाट आएको फोन कसले गरेको हो भनेर …